Waqti badbaadi inaad ku rinjiyeysid sawiradaada Sawir qaade | Abuurista khadka tooska ah
Judith Murcia | | muujiye
Sawiraha waa a qalabka naqshadeynta taasi waxay na siisaa qalab badan si aan u gaarno natiijooyin xirfadeed. Waxaan ka faa'iideysan karnaa ilahaaga si aan xad lahayn oo aan u barannaa qalabka aasaasiga ah inay na siiso ayaa fure u ah inaan ka faa'iideysano.
Haddii aad ku bilaabatay adduunyada garaafka oo aad jeceshahay inaad sawirto, sameyso garaacis isla markaana aad qaab u siiso fikradahaaga laakiin way kugu adag tahay inaad ku rinjiyeysid goob kasta burushka, ha ka welwelin, waxaa jira qalab waxay ku siin doontaa waqtigaas kaa maqan.
Tallaabada ugu horreysa waa abuur sawir iyada oo loo marayo istaroog. Kuwani waa inay ahaadaan xidhan, taasi waa in la yiraahdo, inay midoobeen. Sababta Si loo isticmaalo aaladda rinjiyeynta is dhexgalka, taas oo noo oggolaan doonta inaan rinji u dhigno mid kasta oo ka mid ah aagagga si dhakhso leh oo fudud
1 Ku diyaari istaroog Sawirka
3 Rinjiyeyn is-dhexgal ah
4 Midab beddelid
Ku diyaari istaroog Sawirka
Marka khadadka la abuuro, waanu xulannaa iyaga oo ku jira menu-ka kore waxaan raacnaa dariiqa soo socda: Ujeeddo - Rinjiga Tooska ah - Abuur. Tallaabadan, waxaan awoodi doonnaa inaan mideyno istaroogyada inkasta oo ay ku yaalliin lakabyo kala duwan. Ikhtiyaar kale ayaa ah ballaarin xulashada oo dhan.
Marka xigta, waxaan dooran karnaa faaligga oo waxaan aadi karnaa barta aaladda in aan ka heli doonno, sida caadiga ah, mid ka mid ah dhinacyada. Waxaan raadineynaa astaanta Rinjiyeyn is-dhexgal ah. Gaaritaanka degdegga ah waxaa lagu gaaraa adigoo riixaya furayaasha, haddii aad isticmaaleyso qalab Apple ah, fn + K. Haddii ay dhacdo in aadan haysan shaashadda la arki karo, u gudub menu-ka kore oo raac dariiqda soo socota: Daaqad - Qalab.
Rinjiyeyn is-dhexgal ah
Markii aan helnay oo aan doorannay qalabka rinjiga is-dhexgalka, waxaan dooran doonaa midabka la rabo oo waxaan u marin doonaa mid kasta oo ka mid ah aagagga. Mid ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka qalabkani waa saxnimada iyo waqtiga aan badbaadino. Waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno a Tiro badan oo imtixaanno ah midab.
Haddii aan horey u haysanno midabada saxda ah ee aan dooneyno inaan isticmaalno calaamadeysan, waan keydin karnaa midabada aan ku dabbaqi doonno shaybaarka iyo markii aan xulano qalabka dheriga dhejiska isdhexgalka, waxaan arki doonnaa in saddex sanduuq oo midab leh ay ka muuqan doonaan dusha astaanta, oo u dhiganta midabada aan ku keydinay shaybaarada. Waxaan ku badali karnaa midabka aan dooneyno inaan ku dhex marinno fallaaraha kumbuyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Rinjigaaga ku rinji wakhtiga diiwaangelinta